Football Khabar » ‘फ्री ट्रान्सफर मास्टर’ युभेन्टसले नयाँ मिडफिल्डर भित्र्यायो !
‘फ्री ट्रान्सफर मास्टर’ युभेन्टसले नयाँ मिडफिल्डर भित्र्यायो !
इटालियन क्लब युभेन्टसले नयाँ सिजनलाई भव्य बनाउने तयारीअनुसार नयाँ खेलाडी भित्र्याएको छ । उसले फ्रेन्च मिडफिल्डर आड्रेन राबिओटलाई फ्री ट्रान्सफरमा अनुबन्ध गरेको हो । फ्रेन्च क्लब पिएसजीसँग सिजन २०१८÷१९ सकिएसँगै सम्झौता सकिएपछि राबिओट सरुवा बजारमा उपलब्ध थिए ।
विगतमा पनि स्टार खेलाडीहरूलाई फ्रि ट्रान्सफरमा अनुबन्ध गर्दै आएको युभेन्टसले अन्ततः राबिओटलाई पनि टुरिन उतारेको हो । युभेन्टसले अफिसियल रूपमा राबिओट टुरिन ल्यान्ड भएको पुष्टि गरेको छ । उसले आजै औपचारिक रूपमै राबिओट अनुबन्धको अफिसियल घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।
२४ वर्षीय युवा खेलाडी राबिओट सेन्टर मिडफिल्डमा निकै प्रभावशाली मानिन्छन् । त्यही भएर पनि कमजोर मिडफिल्डका कारण समस्या भोगिरहेको युभेन्टसले उनलाई नयाँ सिजनका लागि अनुबन्ध गरेको हो । युभेन्टसबाट राबिओटले पाउनेसेवा–सुविधाबारे भने खुलाइएको छैन ।